Iholide igqoka ngokuzeleyo, iAlumn-Winter 2015-2016 - iimodeli ezintle zeNew 2015 ngonyaka
U-Eva Unyaka Omtsha lixesha elihle lokulibala malunga nemibuzo yonke yemihla ngemihla kwaye ujikeleze kwilizwe lembali. Ewe, zonke iifayile kufuneka zibe nenkosikazi yayo, okanye ubuncinane i-princess. Kwaye ufuna ntoni ukuba uphinde uphinde ube yinduna? Njengoko kuboniswe ngamava aseCinderella, kwanele ukugqoka iingubo ezimnandi, apho wena kunye nesikhulu siya kukubona.
Ukungaphumeleli kweso sibalo akuso sonke isizathu sokuzikhanyela ukuzonwabisa ngokugqoka iingubo zowesifazane. Ngokukodwa ngoNyaka kaNtshonalanga, xa umbhiyozo ngokwawo uthetha indlu yangasese yangasese. Ngako-ke, kusekho ixesha lokuthenga ingubo yokuNyaka omtsha, sikunikezela ngokugqithiseleyo kwiingubo zeholide ezihamba phambili zonyaka we-2016 ukwenzela amantombazana kunye nabasetyhini abapheleleyo.
Izigqoko zokugcoba kakhulu zintombazana ezenzelwe amantombazana apheleleyo kuNyaka omtsha 2016
Imveliso yamashishini yanamhlanje ayifani ukwahlula phakathi kweemveliso eziqhelekileyo kunye nokuqokelela. Iifama iholide ezityebileyo Ubusika bonyaka ka-2016 abukho mqathango kulo mgaqo. Iimpawu ezinjalo eziphathekayo njengempahla yendalo, izitayela ezilula kunye nemibala eqaqambileyo ikhona nakwiimodeli zonyaka omtsha zamabhinqa amnandi.
Uhlobo oluthile lwezinto eziqhelekileyo, oluhlala lubalulekile kwaye lunceda abafazi banoma yiphina indlela yokugqoka - umtya omnyama omnyama. Ewe, inguqulelo yanamhlanje yale Coco Chanel ihamba ngeentlobo ezahlukeneyo ngonyaka.
I-silhouette yesibini kunye nombala omnyama ayiguqukanga. Ingubo yamantombazana epheleleyo njengengubo yoNyaka omtsha 2016 kufuneka ikhethe imodeli ene-basque, ibhanti epheleleyo yombala ochaseneyo okanye iinqununu ezicatshulwa kwimikhono. Into ephambili ekukhethiweyo okukhethiweyo kwakukho "ukugqamisa", okwenza kube yimfesane.
Izigqoko zesikhumba ziphakathi kwamanqaku athile asemantombazaneni apheleleyo ezayo 2016. Khetha izitayela ezizimeleleyo ezinobungqingili, ugqoke nge-skirt-sun kunye neengubo ezide zesikhumba. Kwakhona ngefestile iya kuba yimidya yambatho yee-shades eziqhekezayo ezingaqhelekanga kunye neziprint zezilwanyana.
Ukugqoka kwonyaka omtsha 2016 kubafazi abapheleleyo: imibala, izitayela, ifoto
Abasetyhini abaninzi abaqolileyo bafanele bawunake imodeli emini. Ngokweengubo zonyaka omtsha, iingubo "ze-mermaid" kunye ne "bat" zinobuchule ngokukhethekileyo.
Iingubo zambatho kwisitayela se-Retro yinto enye yeNew 2016. Okudumile kuya kuba yimodeli kwindlela yamaMerika 50 kunye neDisco 80.
Iipaliti zengubo zoNyaka omtsha zamantombazana apheleleyo zimelelwe ngemibala enemibala enemibala.
Abasetyhini abacocekileyo banamathotho afanelekileyo omnyama, omhlophe, isilivere. Abaninzi abafazi abanamaqhinga nabanesibindi banokugqoka kwiingubo zokugqoka kunye namaphetheni anqambileyo kunye neepomethriji ze-geometric. Kwakhona phakathi kweengubo zokugcoba ezipheleleyo zeemifanekiso ezininzi zegolide, ezibomvu, i-orange, i-green green, i-caramel, ipereach, i-pink shades.
Kwiholide ixhobile ngokupheleleyo, okanye iingubo zonke izihlandlo
Ingubo yohlwaya yaseTurkey
Izambatho zabaqulunqi baseRashiya
Iingubo ezinamafestile kunye neentlobo zeegusha, iHlabathi 2015-2016, ifoto
Izityiba zesonka: ukubunjwa, izakhiwo eziwusizo. Ungakhetha njani?
Ukuhlafuna. Imbali yokubonakala. Indlela yokusebenzisa ngokuchanekileyo
Isibheno sesinqweno kunye ne-anyanisi
Uju oluvela kwi-dandelions
Iimodeli zokuziphatha kwamadoda emva kokukrexeza
Izinwele ezimnandi neziphilileyo